‘साहारा हस्पिटालिटी’मा झन्डै सय जनालाई रोजगारीको अवसर – Arthik Awaj
‘साहारा हस्पिटालिटी’मा झन्डै सय जनालाई रोजगारीको अवसर
By आर्थिक आवाज २०७९ बैशाख २२ गते बिहीबार ०९:१९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । साहारा ग्लोबल बिजनेस ग्रुप अन्तर्गतको ‘साहारा हस्पिटालिटी’मा झन्डै एक सय जनालाई रोजगारीको अवसर खुलेको छ । सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौंको सिमानास्थल भोटेचौरमा सञ्चालनमा आउन लागेको रिसोर्टका लागि रोजगारीको अवसर खुलेको हो । रिसोर्टले फुल टाइम र पार्ट टाइम गरी विभिन्न पदमा आवेदन आह्वान गरेको छ । रिसोर्टमा काम गर्न चाहनेहरुले आफ्नो बायोडाटासहित डकुमेन्ट इमेल गर्न सक्नेछन् ।
कुन-कुन पदमा दिन सकिन्छ आवेदन ?
Sahara hospitality under Sahara global business group is looking for :
-Executive Housekeeper- 1
– Assistant Housekeeping Manager -3
– Assistant Director of Finance- 1
– Director of Luxury Leisure Sales -1
– Director of Events -1
– Group Sales Manager -5
– Guest Services Manager -3
– Assistant Rooms Manager -16
– Writer’s Room Lounge Manager (F&B) -5
– Assistant Food & Beverage Manager (Outlets) – 3
– Assistant Food & Beverage Manager (Event Services) – 2
– VIP /Lead Host – 2
– F&B Service – 1
– Writer’s Room Server Assistant (Full Time) -5
– Writer’s Room Server Assistant (Part Time) -15
– Writer’s Room Bartender (Part Time) -5
– Writer’s Room Greeter (Part Time) – 5
– Pastry Sous Chef – 1
– Pastry Chef – 2
– Cook – 5
– Part Time Cook -5
– Intermediate Line (Full Time) Cook -3
– Entry Level (Full Time) -12
– Pastry Cook (Part Time) – Overnight Bread Baker 10
– Steward/Dishwasher – Part Time – 3
– Front Office Agent -5
– Communication Agent -3
– Door Attendant -12
– Valet Attendant Full Time -5
– Valet Attendant- Part Time -10
– Executive and Sales Assistant -5
– Security Officer (Full Time) -12
– General Maintenance Engineer -2
– Massage Therapist -5
– HR Manager -1
– Accountant -1
– Accountant (VAT D Dep.) -1
– Gardner -2
SEND YOUR CV: To, [email protected], [email protected]
युवा व्यवसायी सुदर्शनराज शर्माको लगानीमा रिसोर्ट सञ्चालनमा आउन लागेको हो । पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ गन्तव्यको सुरुवात गर्ने तयारी सहित थ्रि स्टार लाइसेन्ससमेत लिएर शर्माले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरी रिसोर्ट निर्माण गरेका हुन् ।
रिसोर्टमा ८० वटा रुम छन् । थप १६ वटा भिल्लाको व्यवस्था छ । ‘एक रातमा २ सय जना पाहुनालाई रिसोर्टमा आवासीय सुविधा प्रदान गर्न सक्छौं,’ उनले भने । रिसोर्टमा सभा, सेमिनार, मिटिङ तथा गोष्ठी गर्नका लागि ३ वटा हलको सुविधा पनि उपलब्ध छ ।
पर्याप्त खुल्ला क्षेत्र तथा पार्किङको सुविधा रहेको रिसोर्टमा डे कार्यक्रम गर्नका लागि १ हजार भन्दा बढी व्यक्तिलाई सेवा प्रदान गर्न सकिने शर्माले जानकारी दिए । ‘काठमाडौंबाट नजिकको दुरीमा हामीले पर्यटकलाई जंगल रिसोर्टको मज्जा उपलब्ध गराउँछौं,’ शर्माले भने, ‘शान्त तथा पारिवारिक वातावरण मन पराउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाईमा रिसोर्ट पर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’